﻿ ‘वडावासीको चाहना बमोजिमका कामहरु गरिरहेका छौँ’
‘वडावासीको चाहना बमोजिमका कामहरु गरिरहेका छौँ’
यतिखेर स्थानीय तहहरु नयाँ आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को लागि बजेट बनाउने क्रममा छन् । विभिन्न वडाहरुका आफ्ना आफ्नै योजनाहरु बजेटमा परेका छन् । यसै सन्दर्भमा बरहक्षेत्र वडा नं.९ का वडा अध्यक्ष दिपक लिम्बूसंग हामीले वडाका विविध विषयहरुमा कुराकानी गरेका छौं । न्युजलयका लागि ज्योती पोख्रेलले गरेको कुराकानीः
अहिले नगरसभा सञ्चालनको लागि आफू जिम्मेवारी समितिको तर्फबाट आवश्यक योजना कार्यक्रमहरु तय गर्नेमा व्यस्त छु ।
यो पटकको वडाको बजेट के कार्यमा लक्षित गर्ने योजना छ ?
अहिले नेपाल सरकारको प्राथमिकताको क्रममा रहेको स्वास्थ्यसम्बन्धी विशेषगरी कोरोना भाइरसको रोकथामलाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्यलाई पहिलो प्रथमिकता दिएका छौं । त्यसका साथै कृषि र शिक्षामा पनि योजना निर्माण गरी क्रमशः रुपमा अगाडि बढाइनेछ ।
महिला तथा बालबालिकाहरुका लागि यसपाली के कस्तो योजना तय गर्नुभएको छ ?
महिला तथा बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासको क्रममा उनीहरुलाई हुन सक्ने कानुनी सचेतनाको कार्यक्रमहरु, यसका साथै कुन प्रकारको कार्यक्रमले उनीहरूको लैंगिक समानताको कुरा, शारीरिक तथा मानसिकरुपमा वृद्धि विकासलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यसैलाई प्राथमिकता दिएका छौं ।
वडामा रहेका समस्याहरु के के छन् ?
वडामा देखिएको अहिलेको मुख्य समस्या भनेको कोरोना भाइरस सम्बन्धि नै हो । जसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि क्वारेन्टाइन निर्माण गरी प्रशासनिक ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्ने कुरा, आर्थिक रुपमा व्यवस्थापन गर्ने कुरा चुनौतिको रुपमा रहेको छ ।
यस्ता किसिमका समस्याहरु समाधानका लागि कुन निकायसमक्ष कसरी माग राख्नुभएको छ ?
समस्या समाधानका लागि विशेष हाम्रो आर्थिक जगेडा कोष निर्माण गरेका छौं । जसमा पदाधिकारीहरूको एक महिनाको भत्तासंगै कर्मचारीहरूको केही दिनको तलबबाट कटाउने गरी र विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूबाट थप सहयोगको कुराहरु अगाडि बढाएका छौं ।
यो ९ नम्बर वडामा विगतका वर्षहरुमा के–कस्ता विकासका कामहरु भए ?
विशेषगरी पूर्वाधार सम्बन्धी कामहरु अगाडि बढ्यो । बाटोघाटो निर्माण साथै आवश्यक संघसंस्थाहरूको भवन निर्माण लगायतको कामहरु सम्पन्न भए । भौतिक पूर्वाधारमा बस्ती बसाउने कामहरुलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । तथापि भौतिक निर्माणका अन्य कार्यहरु भवन निर्माण, धेरैभन्दा धेरै बाटो सम्बन्धी कामहरु सम्पन्न गरियो ।
वडामा आएका समस्याहरु कसरी समाधान गर्नु भएको छ ?
सकेसम्म स्थानीयहरूको सल्लाह सुझाव, नगरपालिका साथै प्रदेशसँग हुन सक्ने प्रदेशसँग र केन्द्र सरकारसँग हुन सक्ने सहयोगको माग गर्ने र प्राप्त भएका त्यस्ता बजेटहरुलाई अधिकतम उपयोग गर्ने गरी वातावरण सिर्जना गरिरहेका छौं ।
वडाका कर्मचारीबाट कतिको सहयोग प्राप्त गर्नुभएको छ ?
पदाधिकारीहरूको विचार र कर्मचारीहरुको काम गर्ने शैलीसंग केही केही समस्याहरु छन् । तथापि यो स्थानीय सरकारको यस्ता कमी कमजोरीहरुलाई कर्मचारी र पदाधिकारीको बीचमा समन्वय गर्दै अगाडि बढ्ने गरेका छौं ।
चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुभएका विकास निर्माणका कामहरु कत्तिको सम्पन्न गर्नुभएको छ ?
उल्लेख भएका सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएका छन् त भन्न सकिन्न तर जुन जनताले माग गरेका थिए, चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुराहरु धेरैभन्दा धेरै भौतिक सम्बन्धीका कुराहरु, शिक्षा, स्वास्थ्यका कुराहरुमा आफ्नो विवेकले भ्याएसम्मका कामलाई अगाडि बढाएका छौं ।
वडाको आगामी विकासका योजनाहरु के–के रहेका छन् ?
हामीले स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयलाई प्रथामिकतामा राखेका छौं । साथै कृषी, शिक्षा र पूर्वाधारका क्षेत्रहरुलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं ।
कोरोना भाइरसको महामारी फैलिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा वडाले विपन्नहरुका लागि के कस्तो व्यवस्था गरेको छ ?
हामीले बितिसकेको दुई वर्षमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौं । हाल कोरोना भाइरससंग लड्ने सरकारको कार्यक्रममा थप सहयोग गरेर सरकारको नीति निर्देशन के आउन सक्छ त्यसैलाई पूर्व तयारीका साथ सही ढंगले व्यवस्थापन गरेर आवश्यकतानुसार कार्यक्रमहरु अघि बढाएका छौं ।
त्यस्तै रोजगारी पहिलो प्राथमिकताको विषयमा दिएको छ । रोजगारी व्यवस्थापन गर्ने कुराहरुमा वडा नम्बर १ दिगो सक्षम रोजगार काममा सक्षम देखिएन । तथापी अल्पकालीन रोजगारी व्यवस्थापन गर्ने कुरामा विपन्न परिवारलाई अस्थायी प्रकृतिका कामहरू, ज्यालादारी हिसाबमा सहभागी गराउने, उनीहरुलाई आएको र पाउन सक्ने प्राथमिकतामा राखेका छौं ।
अन्त्यमा सम्पूर्ण वडा बासीहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
अहिले कोरोना भाइरस जुनरूपमा नेपालमा फैलिरहेको छ । आतङ्कित रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसलाई मानसिक रुपमा, सामाजिक रुपमा सरकारको निर्णयलाई पालना गर्दै सबै वडा बासीहरुले स्थानीय सरकार र वडा समितिलाई पनि नैतिक रुपमा दबाब र सहयोग गर्दै अगाडि बढी दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु ।